Web-dl 1080p – Quality – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Till Death (2021) Unicode ဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၂၁နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Horror, Thriller ဇာတ်ကားလေး Till Death နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ အန်မာ၀◌ဘ်စတာ (Megan Fox) ဟာ အောင်မြင်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀◌ဘ်စတာဇနီးမောင်နှံရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ အပြင်ပန်းမှာအဆင်ပြေပုံပေါ်နေပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ယိုယွင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန်မာဟာ သူ့ယောကျ်ားမက်ခ်ရဲ့ရုံးခန်းက၀◌န်ထမ်းဖြစ်သူ တွန်မ်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ မက်ခ်နဲ့အန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့ မက်ခ်ဟာအန်မာကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပြီး သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အမှတ်တရတွေရှိခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ အန်မာအိပ်ယာကနိုးနိုးချင်းမှာ မက်ခ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုမယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အန်မာဟာ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်ပြီး ဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ??? ဒီထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအတိတ်တွေရှိနေမှာလဲ??? ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်နဲ့အညွှန်းရေးသူကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ ၂၀၂၁ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိထားတဲ့ Horror, Thriller ဇာတ္ကားေလး Till Death နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားရဲ႕အဓိကဇာတ္လိုက္ျဖစ္တဲ့ အန္မာ၀◌ဘ္စတာ (Megan Fox) ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရဲ႕ဇနီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀◌ဘ္စတာဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးဟာ အျပင္ပန္းမွာအဆင္ေျပပုံေပၚေနေပမယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ယိုယြင္းေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္မာဟာ သူ႔ေယာက်္ားမက္ခ္ရဲ႕႐ုံးခန္းက၀◌န္ထမ္းျဖစ္သူ တြန္မ္နဲ႔ေဖာက္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မက္ခ္နဲ႔အန္မာတို႔ရဲ႕မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာေတာ့ မက္ခ္ဟာအန္မာကိုလက္ေဆာင္တစ္ခုေပးခဲ့ၿပီး သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕အမွတ္တရေတြရွိခဲ့တဲ့အိမ္ေလးကိုေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ရဲ႕ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မွာေတာ့ အန္မာအိပ္ယာကႏိုးႏိုးခ်င္းမွာ မက္ခ္ဟာကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသသြားခဲ့ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုမယုံႏိုင္စရာအျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္လိုက္ရတဲ့အန္မာဟာ ...
IMDB: 5.8/10 2.2K votes
My God! Father (2020) Unicode ဒီကားကတော့ တရုတ်ကား Duckweed (2017) ကို remark ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ မင်းသားမင်းသမီးတွေကလဲ Pope Thanawat Wattanaputi, Ter Chantavit Dhanasevi, Sammy Cowell တို့ပါ ဒီကားကထိုင်းကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း comedy,romance ဘက်ကိုပိုသွားထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ပြိုင်ကားမောင်းရတာ ဝါသနာကြီးတဲ့ ဂေါ့ဟာ ချန်ပီယံဆုတွေရသည်ထိအောင် အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ဝါသနာကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပိတ်ပင်ခဲ့တာမလို့ အဲ့တာကို အမြဲမကျေနပ်ဖြစ်နေခဲ့သူပါသူ့ရဲ့ဖခင်က အန္တရာယ်များတဲ့အားကစားတစ်ခုဆိုကာ ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူငယ်စဉ်မှာပဲ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ထောင်ကျခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှာပဲ သူ့မိခင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့် သူ့ဖခင်နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးက အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီနောက်တော့ ဂေါ့ဟာ ကားတိမ်းမှောက်မှူတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတိတ်ကာလကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူပြန်ရောက်သွားတဲ့ကာလဟာ သူမမွေးခင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကာလမှာ သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ကာ သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နေသွားရင်း သူ့ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တဖြည်းဖြည်းသိလာရတဲ့အခါ……ပစ္စုပ္ပန်မှာရော ဂေါ့နဲ့သူ့ဖခင်ကြားက အဖုအထစ်တွေကို ပြေပျက်စေနိုင်မလား…. အတိတ်ကာလကို ရောက်သွားချိန်မှာလည်း ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပြသထားပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Chit ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီကားကေတာ့ တ႐ုတ္ကား Duckweed ...
No Sudden Move (2021) Unicode No Sudden Moveဇာတ်ကားကတော့ နာမည်ကြီး မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Don Cheadleနဲ့Benicio del Toroတို့ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Crime/Drama ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်1954လောက်မှာDetroitပြည်နယ်မှာအမေရိကန်မှာ နာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီလေးခုက လျို့၀ှက်ပရောဂျက်တစ်ခုကို ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူတို့ လုပ်နေတဲ့ပရောဂျက်ကနေ ငွေညစ်ဖို့ လူမိုက်ဂိုဏ်းတစ်ချို့က အကြံရသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတော်တဲ့Curtနဲ့Ronaldကို ပရောဂျက်နဲ့သတ်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုသွားယူပေးဖို့ ဌားခဲ့တယ်။ Curtနဲ့Ronald ဟာ အစပိုင်းမှာ ငွေရလွယ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟုယုံကြည်ကာ အလုပ်ကိုလက်ခံပေမဲ့ကိစ္စတွေက ထင်သလိုမရိုးရှင်းဘဲ သူတို့အလုပ်ရှင်တွေက အလုပ်ပြီးသွားရင် သူတို့ကိုသတ်ပစ်ဖို့ ကြံထားကြောင်းကို သိသွားသောအခါ ဒီလျို့၀ှက်စာရွက်စာတမ်းကို နှစ်ယောက်သားရအောင် ယူပြီးတော့ သူတို့ကို ဌားခဲ့တဲ့ လူတွေကို ပြန်ငွေညစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Curtနဲ့Ronaldမှာလဲ သူ့တို့အတိတ်က ရန်သူတွေက သူ့ကိုအသေရရ အရှင်ရရလိုက်ဖမ်းနေတာကြောင့် နှစ်ယောက်ဟာ အင်အားကြီး ငွေချမ်းသာလူတစ်စုနဲ့ ဦးနှောက်ချင်းပြိုင်ပြီး အကွက်ရွေ့ဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်။Curtနဲ့Ronaldတို့ နှစ်ယောက်သား ရဲတွေ ငွေချမ်းသာတွေ သူတို့ရန်သူတွေလက်ကနေ ဘယ်လိုလွှတ်အောင်ပြေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nora ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi No Sudden Moveဇာတ္ကားကေတာ့ ...
The 8th Night (2021) Unicode လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ လောက်က မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်က လူသားတွေကို ဒုက္ခပေးဖို့ လူ့ပြည်နဲ့ငရဲကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တံတားရဲ့ တံခါးပေါက်ကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် ဘုရားက လက်ဦးသွားပြီး မကောင်းဆိုးဝါးဆီကနေ သူ့ရဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ထုတ်ယူပြီး ဓာတ်တော်ကြုတ်နှစ်ခုထဲမှာ သီးခြားစီ အရှေ့ရပ်နဲ့ အနောက်ရပ်မှာ သော့ခတ်သိမ်းထားခဲ့တယ် သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်း မျက်လုံးနှစ်လုံး ပြန်မပေါင်းစည်းသွားအောင် သေချာစောင့်ရှောက်ဖို့ မှာသွားခဲ့တယ် ဒါက နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ကျမ်းဂန်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ဒဏ္ဍာရီတယစ်ခုလို့ ထင်ခဲ့ပြပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာ မနုဿဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးက အဲ့ဒါက အမှန်တရားဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော် ဒီဇာတ်ကားကိုအညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moh Moh ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေလာက္က မေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေကာင္က လူသားေတြကို ဒုကၡေပးဖို႔ လူ႔ျပည္နဲ႔ငရဲကို ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ တံတားရဲ႕ တံခါးေပါက္ကို ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ ဘုရားက လက္ဦးသြားၿပီး မေကာင္းဆိုးဝါးဆီကေန သူ႔ရဲ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့မ်က္လုံးႏွစ္လုံးကို ထုတ္ယူၿပီး ဓာတ္ေတာ္ၾကဳတ္ႏွစ္ခုထဲမွာ သီးျခားစီ အေရွ႕ရပ္နဲ႔ အေနာက္ရပ္မွာ ...
IMDB: 5.5/10 669 votes
Article 15 (2019) Unicode မနေ့တနေ့ကမှ အရာရှိအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ "အာရ်ယန်းရန်ဂျန်" က သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ကျတဲ့နေရာ "လာဂွန်း"လို့ခေါ်တဲ့ တောရွာကို ရောက်လာတယ် ထုံးစံအတိုင်း အိန္ဒိယတောရွာအများစုလို ဇာတ်အနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားတာတွေ ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ အပြည့်ပေါ့ အဲ့လို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုက အစ လူလူချင်း မသိတတ် နားမလည်မှုတွေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲလွန်းတဲ့ဒီရွာက အာရ်ဂျွန်းကို ရောက်ရောက်ချင်းနေ့မှာပဲ အမှုတစ်ခုနဲ့ကြိုဆိုပစ်လိုက်တယ် အမှုက မိန်းကလေးသုံးယောက်ပျောက်နေတဲ့ထဲက မိန်းကလေးနှစ်ယောက်သစ်ပင်မှာကြိုးဆွဲချခံရပြီး နောက်တစ်ယောက်က ပျောက်နေတယ် ပေါ့ အဲဒီမိန်းကလေးသုံးယောက်ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလဲ ဒီအမှုရဲ့တရားခံတွေကကောဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ အာရ်ဂျွန်းတစ်ယောက် သာမာန်ထက်ပိုလွန်တဲ့ သံသယ‌တွေကြားကနေ ဖော်ထအဲဒီမိန်းကလေးသုံးယောက်ဘာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ရော၊ တရားခံ ပေါ်လာခဲ့တယ် ဆိုရင်ရော အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ကြားကနေ ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ကို ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Ruim ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi မေန႔တေန႔ကမွ အရာရွိအသစ္ေလးျဖစ္တဲ့ "အာရ္ယန္းရန္ဂ်န္" က သူ႔ရဲ႕ပထမဆုံးတာဝန္က်တဲ့ေနရာ "လာဂြန္း"လို႔ေခၚတဲ့ ေတာ႐ြာကို ေရာက္လာတယ္ ထုံးစံအတိုင္း အိႏၵိယေတာ႐ြာအမ်ားစုလို ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ ခြဲျခားတာေတြ ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ အျပည့္ေပါ့ အဲ့လို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက အစ လူလူခ်င္း မသိတတ္ နားမလည္မႈေတြနဲ႔ ေရွး႐ိုးစြဲလြန္းတဲ့ဒီ႐ြာက အာရ္ဂြၽန္းကို ...
IMDB: 8.2/10 26K votes
Ghost Lab (2021) Unicode ထိုင်းဇာတ်ကားတွေဘာသာသိပ်မပြန်လို့ ပူဆာနေတဲ့သူတွေအတွက် Netflix က Thai ဇာတ်ကားတွေ Series တွေကို Channel M-Sub ကနေ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းအညွန်း လောကကြီးမှာ လူသားတွေပဲနေထိုင်ကြတယ်လိုထင်ပါသလား? ပရလောကသားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာရော ယုံကြည်ပါသလား? Ghost Lab ဆိုတာဘာလဲ? ဆေးရုံတစ်ခုက ဆရာဝန်နှစ်ယောက်.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပရလောကသားတွေတကယ်ရှိမရှိအတည်ပြုဖိုစမ်းသပ်ချက်တွေ သုတေသနတွေလုပ်ကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စူးစမ်းချင်စိတ်နဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကြားမှာ ဘယ်လိုမထင်မှတ်ထားစရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံဖွယ်ရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thriller, Horror အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ထိုင္းဇာတ္ကားေတြဘာသာသိပ္မျပန္လို႔ ပူဆာေနတဲ့သူေတြအတြက္ Netflix က Thai ဇာတ္ကားေတြ Series ေတြကို Channel M-Sub ကေန ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးပါမယ္။ ဇာတ္လမ္းအၫြန္း ေလာကႀကီးမွာ လူသားေတြပဲေနထိုင္ၾကတယ္လိုထင္ပါသလား? ပရေလာကသားေတြရွိေနတယ္ဆိုတာေရာ ယုံၾကည္ပါသလား? Ghost Lab ဆိုတာဘာလဲ? ေဆး႐ုံတစ္ခုက ဆရာဝန္ႏွစ္ေယာက္.. ကမာၻေပၚမွာ ပရေလာကသားေတြတကယ္ရွိမရွိအတည္ျပဳဖိုစမ္းသပ္ခ်က္ေတြ သုေတသနေတြလုပ္ၾကတဲ့ေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စူးစမ္းခ်င္စိတ္နဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုမထင္မွတ္ထားစရာအျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံဖြယ္ရာေတြနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရမလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Thriller, Horror အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ ...
The Boss Baby: Family Business (2021) Unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား အသည်းစွဲ DreamWorks Animated Movie ဖြစ်တဲ့ Boss Baby ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ Season အသစ်လေးက၂၀၂၁မှာထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ Season အသစ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Boss Baby: Family Business ဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 မှာကလေးဘ၀နဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ တင်မ်နဲ့တက်ဒ် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ Season အသစ်မှာတော့ရင့်ကျက်ပြီးလူကြီးဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ Boss Baby လေးဖြစ်တဲ့ တက်ဒ်ကတော့ကုမ္ပဏီသူဌေးကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငွေကိုသာအသဲအမဲရှာနေခဲ့ပြီး၊ အစ်ကိုဖြစ်သူတင်မ်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘ၀လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ အသက်တွေကြီးလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ တမ်ပလီတွန်ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာတွေ့ဆုံခြင်းသိပ်မရှိခဲ့သလို အနေလည်းစိမ်းသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့တင်မ်ဟာခင်ပွန်းကောင်း ဖခင်ကောင်းတာ၀◌န်ကျေပြွန်ပြီး သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအရမ်းချစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးအကြီးလေးတဘီသာကျောင်းနေအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ သမီးဖြစ်သူဟာမိမိနဲ့‌ေ၀◌းကွာသွားပြီလို့တင်မ်ကခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သမီးအငယ်လေးဖြစ်သူတီနာဟာ တင်မ်ရင်းနှီးပြီးသား Baby Corps ကနေစေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မှန်းသိရှိသွားချိန်မှာတော့...တမ်ပလီတွန်ညီအစ်ကိုက ဘယ်လိုမစ်ရှင်တွေနဲ့ စွန့်စားခန်းတွေလုပ်မှာလဲ? တဘီသာနဲ့ရောနားလည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မလားဆိုတာကတော့....ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက မိသားစုသံယောဇဥ◌်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကြည့်မိသူတိုင်းနောင်တမရနိုင်အောင် နွေးထွေးနှစ်ခြိုက်ကြမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားကိုအညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အားလုံးရင္းႏွီးၿပီးသား အသည္းစြဲ DreamWorks ...
IMDB: 6.0/10 1.2k votes
Xtreme (2021) Unicode မက်စီမိုဟာ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ လူယုံတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ သူဌေးမှာ သားအရင်းတစ်ယောက်နဲ့ မွေးစားသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ် မွေးစားသမီးမာရီယာဟာ သူဌေးကြီးရဲ့ အားကိုးရသူတစ်ယောက်အဖြစ် သူဌေးကြီးအနားမှာ နေထိုင်ရသူ သားအရင်းကတော့ လူစီရိုဖြစ်ပြီး သူဟာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပို့ခြင်းခံရပြီးနောက် ရာကူဇာတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို လေ့လာခဲ့သူတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာတော့ လူစီရိုဟာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ၏ စေခိုင်းချက်အရ ကွန်းကလေ့ဗ် အစည်းအဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ညှိုနှိုင်းဖို့အတွက် သွားခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဖခင်အပေါ် သစ္စာဖောက်ကာ မက်စီမိုအား တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ထွက်သွားခိုင်းခဲ့ပြီး ဖခင်အား ကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒါကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ မာရီယာဟာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ် လူစီရိုဟာ မက်စီမိုကိုလည်း သူ့လူယုံတစ်ယောက်ကိုလွှတ်ပြီး အသတ်ခိုင်းခဲ့တာကြောင့် မက်စီမိုနဲ့ သူ့သားဟာ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် အချိန်မလွန်ခင် မာရီယာက လာရောက်ကယ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့် မက်စီမိုဟာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ မာရီယာနဲ့ မက်စီမိုတို့ဟာ လူစီရိုကို ပြန်လည်လက်စားချေဖို့အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ...
IMDB: 5.8/10 2.7K votes
Spenser Confidential (2020) Unicode Spenser Confidentialဇာတ်ကားကတော့ မင်းသားကြီးMark Wahlbergရဲ့ Actionကားသစ်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ရဲအရာရှိSpenserဟာ အထက်အရာရှိJohn Boylanကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ ထောင်ငါးနှစ်ကျသွားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ထောင်ကထွက်လာပြီးနောက်မှာ Spenserကပြသာနာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပြီး Bostonမြို့ကနေ ထွက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ သူထောင်ကထွက်လာတဲ့နေ့မှာဘဲ John Boylanဟာ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံလိုက်ရခဲ့တဲ့အတွက် ရဲတွေက သူ့ကိုသံသယ၀င်ခဲ့ပေမဲ့ လူသတ်သမားက John Boylanနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ ရဲအရာရှိ Terranceဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းနိုင်ခဲ့ကြတယ် Spenserဟာ Terranceနဲ့လဲသိနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက် လူသတ်သမားက Terranceမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိသွားခဲ့တာကြောင့် မတရားမှုကိုလက်ပိုက်မကြည့်နေနိုင်တဲ့ Spenserတစ်ယောက် ဒီအမှုကို သူ့အခန်းဖော် Hawkနဲ့အတူလိုက်စုံစမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် အမှုကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ Spenserဟာဒီအမှုက လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကသူ့ကိုထောင်ကျစေခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပါ ပတ်သတ်မှုရှိနေကြောင်းကိုသိသွားခဲ့ပြီးတော့ အမှုမှန်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့ သူရင်ဆိုင်ရမဲ့လူတွေက လူမိုက်တွေတင်မကဘူး အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ ရဲတွေပါပါနေသောအခါ Spenserနဲ့Hawkတို့နှစ်ယောက် အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အမှုမှန်ပေါ်နိုင်အောင်စုံစမ်းနိုင်မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nora ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Spenser Confidentialဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသားႀကီးMark Wahlbergရဲ႕ Actionကားသစ္တစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ရဲအရာရွိSpenserဟာ အထက္အရာရွိJohn Boylanကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ ေထာင္ငါးႏွစ္က်သြားခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ေထာင္ကထြက္လာၿပီးေနာက္မွာ Spenserကျပသာနာေတြနဲ႔ေဝးေဝးေနၿပီး Bostonၿမိဳ႕ကေန ထြက္သြားဖို႔ရည္႐ြယ္ထားခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ သူေထာင္ကထြက္လာတဲ့ေန႔မွာဘဲ John ...
IMDB: 6.2/10 76k votes